Zeibantuk A Si Theih Lo Mi, A Zuang Mi A Um Ko Tiah American Nih A Feh Ter – Myanmar Chins
October 7, 2019 Hakha Laimi THEITLEI 0
Laimi nih UFOasi lai tiah kan zumh tawn mi Van ahazuan lio Video kan lak ko tiah US ralkap nih an chim.
Van ahazuang mi thilnungaum taktak ko , zeibantukasi timi bel cu theih khawhasi lo tiah American Ti lei ralkap pawl nih an chim.
Mah Video cu To The Sthrs Academy of Arts & Aciencea nih 2017 Decenber in 2018 March tiang khaathlah.
Mah video hi cu 2015 lio taas i cang ko, Cu lio ahcun American ral tuknak Vanlawng thawngpangasi tiah an rak ruah hmasa nainahnu ahcunarak si lo, UFOasi kho tiah ruah bikasi. Hi lio ah Video pahnih an lak khawh i pakhat cu rang taktak inazuan lio videoasi ve.
အမျိုးအမည်မသိ ပျံသန်းနေသော အရာများရှိကြောင်း အမေရိကန် ရေတပ်အတည်ပြု————————————————————————————————–အခု တွေ့မြင်နေရတဲ့ ပန်းကန်ပြားပျံ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာ အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် ရေတပ်က စီအင်န်အင်န် သတင်းဌာနကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို To The Stars Academy of Arts & Sciences က ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအကြားမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုက ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်မှူးတွေရဲ့ အသံပါ ပါပါ တယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာ သူတို့က ဒရုန်းတစ်စင်းလို့ ထင်နေကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသွားကြပါ တယ်။ လေကိုဆန်ပြီး ရွေ့လျားနေတာပါ။ နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာတော့ အရမ်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာတစ်ခုကို ပစ်မှတ် အဖြစ် လိုက်ပြီး ချိန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလို အမျိုးအမည်မသိ ပျံသန်းနေတဲ့ အရာတွေ ပါဝင်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာ ကန့်သတ်အဆင့် လျှော့ချထားလိုက်ပြီဖြစ် တဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် ရေတပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဂျိုး ဂရေဒစ်ရှာက စီအင်န်အင်န် ကို ပြောပါတယ်။“ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်ပျံသန်းမှုတွေ လုပ်နေတုန်း ဝင်လာတဲ့ အရာတွေပါ။ လေ့ကျင့်နေတုန်း အဲဒီလို အရာတွေ ဝင်လာရင် သတင်းပို့ဖို့ သင်တန်းသားတွေကို တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ရှိလို့ပါ။ အဲဒီလို ဝင်ရောက်လာမှုတွေကို အရင်တုန်းက သတင်းမပို့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အရင် နည်းပညာတွေနဲ့ အခုလို ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ မရနိုင်တာ ကြောင့်ပါ”လို့ ဂရေဒစ်ရှာကဆိုပါတယ်။Source: CNN
Posted by One News Myanmar on Wednesday, September 18, 2019
American nih van ah traning an tuah tikah zeibantuk ral dahara hnga tiah ngaithlainak an tuah tawn. Cu ngiathlainak an tuah mi nihatu van ahazuang mi thawngpang hi an tlaih iahmasa ahcun Vanlawngasi tiah an ruah nainarak si lo,Zei bantukasi tiah theihasi lo ,Nain video ah kan lak manh iazuang mi pakhatkhat cuaum ko tiah an chim.